Nhau - Zvimiro zvePurp Packaging
Kavha inomhanya kuburikidza nechero rekutengesa cheni system kubva kune zvakasvibirira zvigadzirwa, kutenga, kugadzira, kutengesa uye kushandisa, uye zvine hukama nehupenyu hwevanhu. Nekuenderera mberi kwekuitwa kwemitemo yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye nekusimudzirwa kwevatengi zvinangwa zvekuchengetedza zvakatipoteredza, isina kusvibiswa ”kurongedza girini” kwave kutariswa zvakanyanya. Zvigadzirwa zvepurasitiki, kunyanya zvine furo polystyrene (EPS), zvine zvazvakanakira mumutengo wakaderera uye mashandiro akanaka, uye anoshandiswa zvakanyanya mundima yekupakata. Ichaparadza nharaunda uye kukonzera "chena kusvibiswa".
Pulp Kuumba zvigadzirwa ndeyekutanga fiber kana yechipiri fiber seyakanyanya mbishi zvinhu, uye iyo fiber yakasviba mvura uye inoumbwa neakasarudzika muforoma, uye ndokuzoomeswa uye kubatanidzwa kuti uwane rudzi rwekupakata zvinhu. Zviri nyore kuwana iyo mbishi zvinhu, pasina kusvibiswa mune yekugadzira maitiro, zvigadzirwa zvine zvakanakira anti-seismic, buffering, inofema uye anti-static performance. Izvo zvakare zvinoshandiswazve uye zviri nyore kudzikisirwa, saka ine yakafara yekushandisa tarisiro mune yekupakata munda weyemagetsi indasitiri, zuva nezuva makemikari indasitiri, nyowani zvichingodaro.
Kurumidza Chikafu Packaging Bhokisi, Chikafu Giredhi Kuteedzera Pulp Mabhokisi, Kudhaya Kuputira Pulp Holder, Mhando dzese dzeKudhaya Kuputira Pulp Holder, Chikafu Packaging Bhokisi, Akasungwa Pulp Tereyi,